पातारासीका सबै वडामा कृषि पकेट क्षेत्र «
पातारासीका सबै वडामा कृषि पकेट क्षेत्र
रैथाने बाली जोगाउन
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका सबै वडा पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । वडाको उत्पादन ततथा अनुकूलताका आधारमा पातारासीका ७ वटै वडामा पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
कृषि उत्पादनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिमा एकद्वार प्रणालीबाट विकास गर्न सबै वडामा पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लछिमन बोहोराले बताए । उनका अनुसार पातारासीको वडा नंं. १ र २ मा फापर पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने वडा नं. ३ मा कालीमार्सी, ४ मा चिनो कागुनो, ५ मा सिमी, ६ मा फलफूल तथा तरकारी र ७ मा आलु, जौ र गहुँ पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । पातारासी क्षेत्र आलु, मकै तथा फापर उत्पादनका हिसाबले आत्मनिर्भर क्षेत्र मानिने छ । पातारासीमा रहेका ३४ सय घरधुरी नै कृषिखेतीमा निर्भर छन् ।
पातारासी गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख रुपक बुढाले जुन वडामा जुन कृषि वस्तु बढी उत्पादन हुन्छ सोही आधारमा पकेट क्षेत्र बनाइएको जानकारी दिए । पकेट क्षेत्र निर्धारणले किसानलाई कृषिप्रति लगाव बढ्ने उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुने आशा गरिएको उनको भनाइ छ । पकेट क्षेत्र निर्धारणले रैथाने बालीको उत्पादन बढ्ने आशामा स्थानीय किसान विष्णु बुढा छन् । कुपोषण घटाउन, मातृ–शिशु सुरक्षा गर्न अर्गानिक कृषि वस्तुको प्रयोग आवश्यक रहेकाले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन पकेट क्षेत्र कोशे ढुंगा सावित हुने किसान बुढाको भनाइ छ ।
परम्परा खेतीले श्रम बढी लाग्ने र उत्पादन कम हुने समस्या भएकाले पकेट क्षेत्रअनुसार आधुनिक खेती प्रविधिबारे किसानलाई अभिमुखीकरण गराइएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढथापाले बताए ।
लोपोन्मुख रैथाने बाली संरक्षणका साथै स्थानीयको आर्यआर्जन वृद्धिका लागि पनि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको बुढ्थापाले उल्लेख गरे । पकेट क्षेत्रको निरन्तरता र उत्पादन वृद्धिका लागि गाउँपालिकाले आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढ्थापाको भनाइ छ ।
साथै पातारासीस्थित नमुना सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष रमा भण्डारीले पकेट क्षेत्रको माध्यमबाट रैथानेबालीमा स्वयं किसान नै जुट्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “पकेट क्षेत्रबाट उत्पादित आलु, तरकारी, चामल, मकै, कोदोको बजारीकरणलाई सहज बनाउन समेत स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, रैथाने बालीमात्रै उत्पादन गर्ने आयातित वस्तु खाने बानीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।”
पातारासी गाउँपालिकाले प्रांगारिक खेतीका लागि जैविक विषादी र मल बनाउने तालिम किसानलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छ । प्रांगारिक खेती गर्दा जग्गा बिगँ्रदैन । वातावरण पनि सफा हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य पनि स्वस्थकर हुन्छ, कृषि शाखा प्रमुख बुढा भन्छन्, “सकेसम्म गोठेमलको प्रयोग गरौँ । यदि गोठेमलको सम्भावना हुन नसकेको खण्डमा खाडल खनेर अर्गानिक मल बनाउँ । रैथाने बालीको उत्पादन गर्नसके बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकार तयार छ ।”
कृषि पकेट क्षेत्र